नेम्वाङ भर्सेस थापा : कडा चुनावी प्रतिस्पर्धा, कसले मार्ला बाजी ?
विशेष नेम्वाङ भर्सेस थापा : कडा चुनावी प्रतिस्पर्धा, कसले मार्ला बाजी ?
Ujyaalo मगलवार, मंसिर १२, २०७४ १९:१७:००
इलाम, मंसिर १२ – मंसिर २१ गते हुने चुनावका लागि पूर्वसभामुख सुवास चन्द्र नेम्वाङले उम्मेदवारी दिनुभएको इलाम क्षेत्र नं. २ मा धेरैको ध्यान तानिएको छ । पूर्वसभामुख नेम्वाङ र पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री केशव थापाबिच दोस्रो पटक चुनावी प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो ।
यस क्षेत्रमा दुई उम्मेदवारले फरक फरक एजेण्डा लिएर मतदातासँग मत माग्न गएपछि चुनावको दिन नजिकिँदै जाँदा उम्मेदवारको एजेण्डाका बारेमा समेत चर्चा बढ्दै गएको छ । यहाँ यसअघि पनि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको थियो ।
फेरि यसपटकको चुनावमा बाम गठबन्धनबाट उम्मेदवार हुनु भएका पूर्वसभामुख तथा एमाले नेता नेम्वाङ र पूर्वराज्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता थापा चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएपछि धेरैको चासो यस क्षेत्रमा परेको हो । पछिल्लो समयमा उम्मेदवारले ल्याएको एजेण्डाका बारेमा समेत यो क्षेत्रका मतदाताबिच चर्चाको विषय बनेको छ ।
उमेरले ६५ वर्ष पुग्नु भएका एमालेका उम्मेदवार नेम्वाङले मतदातामाझ आफूलाई नयाँ संविधान कार्यान्वयन गराउने देवदूतका रुपमा उभ्याउनु भएको छ । उहाँले अबको नयाँ संविधानले भौतिक, सामाजिक, आर्थिक सबै क्षेत्रको विकासलाई चुलीमा पुर्‍याउने भन्दै आफू वाम गठबन्धनको नेतृत्वको खम्बा रहेको बताउनुहुन्छ ।
नेम्वाङ भन्नुहुन्छ, ‘स्थानीय बासिन्दालाई आफ्नो अधिकारका बारेमा सूचित गराउन नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, मेरो उम्मेदवारी अधिनायकवाद लाद्न खोज्नेलाई खबरदारी गर्ने व्यक्तिका रुपमा हुनेछ । म पहिला नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्छु, अनि पाँच वर्षसम्म देश सञ्चालन गरेर नेपाललाई एक सम्वृद्ध देशमा रुपान्तरण गर्छुु ।’ उहाँले देशलाई संविधान विपरित बाटोबाट जान रोक्न विशेष परिस्थितिमा आफू इलाममा उम्मेदवार भएर आएको बताउनुभयो ।
यता नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार ५७ वर्षका केशव थापाले भने आफ्नो उम्मेदवारी इलामको विकासका लागि भएको बताउनुहुन्छ । थापा यसअघिको चुनावमा दुईपटक विजयी भइसक्नु भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘अधिकांश समय इलामको विकासमा बिताएको छु ।
जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा खानेपानीको ट्याङ्की बनाएर सहयोग गरेको छु । इलाम नगरपालिका तीनमा कच्ची नै भए पनि यातायात सुविधाका लागि बाटोमा सहयोग गरेको छु । अन्य स्थानमा शिक्षा, बिजुली लगायतका क्षेत्रमा पनि काम गरेको छु ।’ अबको पाँचवर्षमा इलामलाई चौतर्फी विकास गर्ने एजेण्डा बोकेर विकास निर्माणका लागि काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै थापा मतदाता माझ पुग्नु भएको छ । नामको होइन कामको हेभिवेट बन्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
नेम्वाङका लागि चुनौती
२०५६ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावमा नेम्वाङ इलाम क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवार बन्नु भएको थियो । थापा भने क्षेत्र नं ३ बाट हुनुहुन्थ्यो ।
२०५६ मा नेम्वाङ क्षेत्र नं. २ बाट कांग्रेस नेता कुलबहादुर गुरुङलाई पराजित गर्दै विजयी बन्नु भएको थियो । २०७० सालको चुनावमा भने थापाले जिल्लाको क्षेत्र नं. ३ बाट एमालेका टेकबहादुर राईलाई पराजित गर्दै विजय हाँसिल गर्नु भएको थियो । त्यतिबेला सांसद भएपछि थापाले आफ्नो क्षेत्रमा सक्दो विकासको काम गर्नुभएको थियो । नागरिकमाझ बोले जतिका काम गरेर देखाएका कारण सच्चावादी नेता भनेर परिचित बन्नु भएको छ । उहाँ त्यही समयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री पनि बन्नु भएको थियो ।
२०७० सालमा इलाम क्षेत्र नं ३ बाट विजयी बन्नु भएको थापा सिङ्गो जिल्लाबाटै सबैभन्दा बढी मतान्तरले जित्ने उम्मेदवार हुनुहुन्छ । उहाँ एमालेका टेकबहादुर राईलाई २ हजार १६३ मतले हराउदै विजयी बन्नु भएको थियो । थापाले १५ हजार ८६८ मत ल्याउनु भएको थियो । राईले भने १३ हजार ७०५ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो ।
त्यही क्षेत्रमा माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार बन्नु भएका धिरेन्द्र शर्मा रमणले ३ हजार ७४५ मत ल्याउनु भएको थियो । शर्मा अहिले वाम गठबन्धनबाट इलाम क्षेत्र नम्बर २ को ‘ख’ बाट प्रदेशसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार हुनुहुन्छ ।
मतदातामाझ विकासप्रेमी नेताका रुपमा चिनिनु भएका थापा स्थानीय बासिन्दाका लागि लोकप्रिय हुनुहुन्छ । यस क्षेत्रमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चबाट युुवा नेता दीपककुमार योङहाङ्ग उम्मेदवार हुनुहुन्छ । इलाम २ मा जनजाति मतदाताको बसोबास बढी छ । स्थानीय चुनावमा १÷१ वटा वडामा मञ्चले प्यानलसहित विजय हाँसिल गरेको छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीमा आस्था राख्ने मतदाताबाट मतको जोडघटाउ हुने पक्का छ । वाम गठबन्धनका कारण केही बलियो मानिए पनि नेम्वाङलाई केही चुनौती थपिएको छ ।